MOH सिंगापुर - हात, खुट्टा र मुख रोग | OMG समाधानहरू
MOH सिंगापुर - हात, फुट र मुँहासे रोग
एचआईएमएमडी को जोखिम को कम गर्न को लागी मंत्रालय व्यक्तिगत र पर्यावरण स्वच्छता को उच्च स्तर को बनाए रखने को महत्व को बल दिनुहोस। आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई निम्न राम्रा अभ्यासहरू अपनाउने यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ:
खाने र पछि शौचालय जाने पछि साबुन संग हात धोएं;
खाँसी वा छट्पटिँदा ऊतकको मुख र नाक समार्नुहोस्, र ऊतकलाई तुरुन्तै एक बिनमा फ्याँस्नुहोस्;
खाने बर्तन साझा नगर्नुहोस्।
आमाबाबुले पनि यो पनि सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि नुन वा मौखिक स्रावले भत्काएको खिलौने वा उपकरणहरू उनीहरूलाई फेरि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले सफा गर्नु पर्दछ।
आमाबाबुले बच्चालाई बुखार, मुँह अल्सर र ह्यान्ड्स, घुमाउने वा बटुवाहरूमा रथहरू गर्नुपर्दछ प्रारम्भिक डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ। एचएफएमडी संग बच्चाहरु घर मा रहन को लागी जब सम्म सबै छालाहरु सूखे रहयो छ। यस अवधिको समयमा बालबालिकालाई पर्खिन नसक्दा अन्य बच्चाहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्दछ। बच्चालाई कुनै सार्वजनिक वा भीड ठाउँहरूमा ल्याइनु हुँदैन। उचित स्वच्छता पनि घर मा अभ्यास गर्नु पर्छ ताकि अन्य परिवारका सदस्यहरु लाई प्रसारण गर्न को लागी।
ह्यान्ड, फुट र मुँह रोग के हो?
ह्यान्ड, खुट्टा र मुख रोग (एचएफएमडी) एक मानव सिन्ड्रोम हो जुन योनिभेरिडाडा परिवारको आंत विषाणु हो। HFMD को सबै भन्दा साधारण उपभोगहरू Coxsackie हुन् एक भाइरस एक्सएनएमएक्स र इन्टोभिरस 16 (EV-71), तर coxsackievirus वा enterovirus को विभिन्न उपभोगहरूको कारण हुन सक्छ।
HFMD एक सामान्य र अत्यधिक संक्रामक भाइरस संक्रमण हो जुन सामान्यतया हल्का, आत्म-सीमित फेब्रुअरी रोगको कारणले गर्दा म्याक्युलपैपुलर रसिश हुन्छ जसले हात, खुट्टा र मौखिक गुफाको छाला समावेश गर्दछ। HFMD सामान्यतया सामान्य छ र साधारणतया शिशु र बच्चाहरूलाई असर गर्छ, तर यस अवसरमा इम्युनोकम्पेटेंट वयस्कहरूलाई असर पार्न सक्छ। HFMD कारण भाइरस प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत माइक्रस, लारा वा संक्रमित व्यक्तिको मल संग फैलिएको छ। सामान्यतया ग्रीष्म र शरद ऋतु महिनाको समयमा HFMD सामान्यतया नर्सरी स्कूल वा किबोर्डगार्टनहरूमा सानो महामारीमा हुन्छ। सामान्य इन्भाइभेशन अवधि 3-6 दिन हो।
एचएफएमडीलाई खुट्टा र मुँह रोगको साथमा पनि भ्रमित नहुनु हुँदैन (भेडा र मुँह रोगको रूपमा पनि चिनिन्छ) भेडा, पशु र स्वाइनलाई असर गर्न ज्ञात एक फरक वायरल रोग (दुवै रोगहरु प्यानोर्नभेरिडाई परिवारका सदस्यहरु बाट उत्पन्न हुन्छन्) तर जनावरहरू र मानिसहरूको बीचमा प्रसारित छैन।
साइन्स र लक्षणहरू
प्रारम्भिक प्रोड्रोमल लक्षणहरू प्रायजसो गहिरो गले पछि बुखार हुनसक्छन्। भूखान र सामान्य मलजल हुन सक्छ। बुखारको सुरुवात पछि एक र दुई दिनपछि, दु: खको पीडाहरू (घाँटीहरू) मुख, गला, वा दुवैमा देखा पर्न सक्छ। एक धब्बा (घाँटी) हात, खुट्टा, मुख, जीभ, गाल भित्र भित्र, र कहिलेकाहीँ बट्टरहरू (तर सामान्यतया, बटुवाहरूमा खसाल दस्तुरको कारणले) मा प्रकट हुन सक्छ। HFMD सामान्यतया 7-10 दिन पछि यसको समाधान गर्दछ।
HFMD को लक्षण समावेश हुन सक्छ
दर्दनाक प्रतिरक्षा, आन्तरिक, नाक, वा अनुहार घाँटी, अल्सर वा छालाहरू
म्यापल्युपपेरुलर रश, पछि हातमा ह्यान्ड्समा छालाहरू संग भिडीयो घासहरू पछि, खुट्टा, बटुवाहरू, र कहिले काही ओठहरूमा। यो बच्चाले बच्चाहरुका लागि दुर्लभ खुट्टाको खुट्टा छ, तर वयस्कों को लागि अत्यन्त खुसी हुन सक्छ
साना बच्चाहरु र बच्चाहरु को बटनों मा शोर या छालाहरु उपस्थित हुन सक्छन्
शिशु र toddlers मा चिन्ता
प्रायः पेशात्मक लक्षण र लक्षणहरू मात्र एक निदान गर्न सकिन्छ। यदि निदान स्पष्ट छ भने, गले झाँट वा स्टूल नमूना संस्कृतिद्वारा भाइरस पहिचान गर्न सकिन्छ। सामान्य इन्सुलेशन अवधि (संक्रमण र लक्षणहरूको सुरुवात बीचको समय) तीन देखि छ दिनसम्म पर्दछ।
कसरी HFMD स्प्रेड गर्दछ
HFMD व्यक्तिबाट व्यक्तिलाई एक संक्रामक व्यक्तिको छिटोबाट निकास निर्वहन, लारा, मल र तरल पदार्थसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी फैलिएको छ।
HFMD सँग संक्रमित व्यक्तिले रोगको अवधिको दौरान धेरै संक्रामक हुन्छ। यद्यपि भाइरस संक्रमण पछि धेरै हप्ताको लागि स्टूलमा जारी रहन सक्दछ, यदि रोग सामान्यतया सामान्यतया कम कम संक्रामक हुन्छ। यद्यपि, राम्रो व्यक्तिगत र पर्यावरणीय स्वच्छता कायम राखिनु पर्छ।
त्यहाँ छ कुनै विशिष्ट उपचार छैन लक्षणहरूको राहत। एंटीबायोटिक्ससँग उपचार प्रभावकारी छैन र संकेत दिएको छैन।
त्यहाँ छ HFMD टीका छैन हाल उपलब्ध छैन।
HFMD मा थप जानकारीको लागि, कृपया MOH वेबसाइटमा सोधिने प्रश्नहरू हेर्नुहोस् http://www.pqms.moh.gov.sg/apps/fcd_faqmain.aspxवा विद्यालय र बालबालिका केन्द्रका लागि संक्रमण नियन्त्रण दिशानिर्देश.
MOH ले स्थानीय संक्रामक रोग अवस्थामा एक साप्ताहिक बुलेटिन पनि प्रकाशित गर्दछ यहाँ.
15247 कुल दृश्यहरू 27 हेराइ आज